xnxx: 4 mazano akareruka kuita kuti hushamwari hwedu hugare - Tamban RELAY
xnxx: 4 mazano akareruka kuita kuti hushamwari hwedu hugare
Hushamwari chinhu chakanyanya kukosha muhupenyu hwedu, asi hazvisi nyore nguva dzose kuti hushamwari hwedu hugare. Heano mana matanho ekuita kuti zviitike!
Sezvinei nerudo izvo dzimwe nguva zvingave zvakaoma kutokanganwa, hushamwari hwakakosha kwazvo muhupenyu hwedu. Neshamwari dzangu, tinowanzogovana nguva dzakanaka uye dzakaipa nguva uye kuseka kwakabatana kana tasangana navo. Uye kana isu tikapfuura nepakati peyakaoma nguva, tinoziva kuti tinogona kugara tichivimba kuti dzotinyaradza. Asi, sezviri muhukama hwese, panogona kunge paine kusawirirana uye kusanzwisisana zvinokanganisa chisungo ichi. Uye nekuti isu tinotya kurasikirwa neavo vanoreva zvakanyanya kwatiri, dzimwe nguva tinozeza uye hatingatauri zvatiri chaizvo mumwoyo medu. Heano mana matipi ekuita kushamwaridzana pakupedzisira!
Gamuchira mumwe nokukanganisa kwake
Chikwereti: Getty / Hero Mifananidzo
Kana iwe uri shamwari nemumwe munhu, iwe unofanirwa kugamuchira mumwe nekutadza kwavo. Hapana munhu akakwana uye panofanira kuve paine zvinhu zvaunofanira kubata muhunhu hwemumwe munhu.. Chinhu chikuru hachisi chekutonga shamwari yako uye nekutaura nekutendeseka kunozovatendera kuti vafambire mberi uye kuti vasazonzwa vaine mhosva. Kukurukurirana kwakakosha uye kuchakubatsira iwe kuti usanzwisise.
Heano mana matanho ekukunda kusawirirana newaunoshanda naye
Kana zvakanaka kuvapo kana zvinhu zvese zvanyatsofamba, zvinofanirawo kunge paine zvese zvisiri izvo uye imwe yacho ichipfuura nenguva yakaoma. Kunyangwe kurambana, kupokana kubasa kana kungotsika tsika, ratidza shamwari yako kuti iye / iye ane hanya newe uye kuti iwe unoda kuve uripo kwauri. iye iye. Bvunza nhau nguva zhinji uye farira hupenyu hwake asiwo mukugara kwake. Uye zvekare, usave mukutonga kana iye akasarudza kuvimba newe. Kurudzira iye / iye uye ave nemutsa!
Chikwereti: Alexis Brown kuburikidza neUsplash
Kunyangwe kazhinji kuchinge kwakaomarara kuteedzera zviitiko zvako zvese, edza kuronga mafambiro uye usarege imwe yacho ichitanga. Muratidze iye kuti iwe unoda kumuona uye kuti pane izvo, waronga kuita nguva. Saizvozvo, iwe unogona kufunga nezvepakutanga mazano ezviitiko zvekuita neshamwari kuitira kuti uwedzere kusimbisa kubatana kwako. Muchidimbu, edza zvakanyanya sezvinobvira kuti usazorora pane ako laurels.
Iva akavhurika pfungwa
Dzimwe nguva haubvumire uye kusawirirana kunomuka. Kutanga, ziva kuti izvi zvakakwana. Kunyangwe vari mumuchato kana muhukama hushamwari, panofanirwa kuve nekukakavara uye nguva dzakaomarara, asi hazvireve kuti zvese zvapera. Ingobvuma kuti iwe hausi pane iyo peji rimwe uye remekedza zano reshamwari yako. Mukuwedzera, iwo zvakare mukana wekuzvipfumisa iwe uye kuvhura kune mamwe maonero ekuona. Hwakanyanya hutano! Zvakare, dzivirira kuverenga pakati pemitsetse uye kuwedzeredza mameseji. Usazvimanikidza nemeseji mameseji. Kupfuura zvese, iva iwe pachako. Izvi zvichiri kunyanya kukosha.
Chinyorwa ichi chakatanga kuoneka pa: https://trendy.letudiant.fr/4-conseils-pour-faire-perdurer-une-amitie-a4953.html
OPEC yakatarisana neyakakwira mafuta iri kugadzirira nguva yekudonha kudiwa!
Easy Montana, murume anofungidzirwa saDJ Arafat kaviri, anoita zvakazarurwa zvinotyisa nezveArafat